Google Play dia nanova ny politikany indray mandràra ny hevitra amin'ny famaritana | Androidsis
Cristina Torres sary placeholder | | Fampiharana Android, hevitra
Azo antoka fa ny fiovana ao amin'ny Google Play dia miseho imbetsaka kokoa noho ny nanaovana ampahibemaso. Raha ny marina, afa-tsy ireo vaovao manan-danja izay misy fiatraikany mivantana amin'ireo mpampiasa, dia tsy fahita firy ny mamela ny mason'ny mpamorona. Na izany aza, androany ao amin'ny Androidsis izahay dia te-hanavaka an'io lalàna tsy voasoratra io ary hiresaka momba ny iray amin'ireo farany izay nankatoavina tsy misy bebe kokoa ary manandrana mandalo ho toy ny olana madinidinika, na dia zavatra mahasoa ho an'ny mpampiasa aza. Saingy toa ahy manokana fa misy fatiantoka betsaka kokoa noho ny tombony. Ny zava-nitranga dia izao Google mandrara ny fandefasana hevitra amin'ny famaritana azy ireo an'ny rindranasa. Raha atao teny hafa, ireo mpampiasa dia tsy ho afaka hampiasa an'io toerana io mba hahafahany mampiseho rohy handinihana ny fampiharana azy ireo ary mety ho zava-dehibe amin'ny fampidinana na fividianana izany.
Na dia ny hevitra ny Google hanala rohy sy hevitra Amin'ireto famaritana ireto dia toa natao hahasoa ny mpampiasa izany, satria araka ny fanazavan'izy ireo dia manazava izahay fa hahita fanombanana izay tsikaritra ho toy ny zavatra terena, ary afaka manome sary ratsy eo amin'ilay faritra ihany koa rehefa misy eritreritra hafa momba azy , ny marina dia tsy manisy fatiantoka lehibe izay misy fiatraikany amin'ny mpampiasa sy ny developer. Farafaharatsiny amin'ny maha-tonian-dahatsoratra ahy dia hitako hatrany fa ao anatin'ny famaritana ireo fampiharana dia saika misy rohy mankany amin'ny bilaogy na tranokala izay anaovana famakafakana tsara ilay vokatra. Ary tsy dia misy dikany firy izy ireo, fa avy amin'ny tranonkala na vondrom-piarahamonina eken'ny mpampiasa azy ireo ihany. Izany hoe, manome lanja be tokoa izy ireo rehefa manapa-kevitra.
Doka miafina ho an'i Google
Google miaraka amin'ity politika vaovao ity manery ny mpamorona rehetra hanaisotra ny rohy fandinihana na famerenana ny fampiharana azy ireo ao anatin'ny famaritana, hadinon'izy ireo fa misy ny hevitra misy ifandraisany bebe kokoa noho ny hafa. Raha ny marina, na dia manana ny toerany manokana aza ny mpampiasa, ary samy afaka manombana fampiharana tsara na ratsy ny tsirairay, dia tokony ho ekena fa tsy mitovy ny hoe olona tokana raha tsy misy referansa amin'ny tranonkala no mahafeno azy tsara, anaovan'ny haino aman-jery iray izany. fifandraisana mifandraika. Ary izany indrindra no niseho tamin'ireo famaritana. Miaraka amin'ity hack ity dia very ny fanohanan'izy ireo izay tsy maintsy tadiavin'izy ireo samirery amin'ny Internet, manamarina ireo tranonkala miresaka momba ilay rindranasa tadiaviny.
ny resy ihany koa ireo tranonkala, satria tamin'izany dia nanana rohy mivantana avy amin'ireo rindranasa izy ireo. Saingy heveriko fa amin'ity ady vao mitam-piadiana ity, ny tena voakasik'izany dia ireo mpamorona izay tsy maintsy miatrika ireo mpampiasa tsy dia tsara fanahy indraindray izay mitsikera ny fampiharana azy ireo tsy amin'antony. Ny marina dia ny fanapahan-kevitra vao noraisin'i Google ary nahatonga ny fenitra ho ara-drariny, ny tambajotra dia tokony hanome toky fa afaka mamantatra ireo resaka hosoka, izany hoe ireo izay mitady hanisy ratsy ny mpamorona sy ny fampiharana fotsiny. Raha ny marina, misy ny sasany ary mamporisika ny olona izy ireo hampitsahatra ny fampidinana ireo rindranasa tena tsara, na noho ny fanafihana avy amin'ny fifaninanana, na noho ireo troll Internet izay tsy misy zavatra tsara hatao intsony noho ny mitsikera noho ny fitsikerana.
Saingy toa tsy nahatratra rafitra mifantina tahaka ilay nofariparitanay i Google, ary noho izany ny politika vaovao Google Play Tsy hitako hoe mahaliana mihintsy. Raha izany, raha mpamorona ianao nefa tsy manaraka an'io dia tokony ho fantatrao fa afaka manafoana ny fampiharana anao i Google amin'ny fotoana rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Google Play dia nanova ny politikany indray, mandrara ny tsikera amin'ny famaritana
Bernard dia hoy izy:
mijanona ny fivarotana kilalao
Mamaly an'i bernardo
Sary maro hafa momba ny Huawei Ascend P8 izay havoaka amin'ny volana martsa 2015